6 Nzira dzekuwana ITIL Foundation Certification - ITIL Kudzidziswa muGurgaon
Nzira Yokuwana nayo ITIL Foundation Certification
Nzira Yokuwana nayo ITIL Foundation Certification muGurgaon
ITIL inotsanangurwa neIpe Technology Technology Infrastructure Library. Yakave yakatanga kugadzirwa mu1980s neCentral Computer neTelcommunications Agency (CCTA) kukudziridza marongerwo emitemo. MunaEpril 2001, CCTA yakabatanidzwa muhofisi yeUnited States Treasury - OGC.
ITIL yakagadzirirwa mararamiro akanaka IT Service Management (ITSM) iyo inobatsira mukubudirira kwekutsigirwa kwakasimba uye kuendeswa kwepamusoro-soro asi zvisingakwanisi kutarisira IT. II IT Foundation Chikoro chekudzidzisa chinopa ruzivo runoshanda rwemashoko makuru, mazano, maitiro uye mabasa anoshanda kuITSM. Dzidzo yacho inogadzirira mumwe munhu kuti afanane nekubudirira ITIL Foundation certificate test.
Iyo ITIL Foundation Certification course inoshandisa 26 ITIL nzira pasi pemishanu modules:
Kuramba Uchishanda Kuvandudza
IIT certification inosimbisa unyanzvi hwemhizha hwekutsvaga pakushandisa IT senhare ine simba yekuita kuti kukura kwebhizimisi.
Heino urongwa hwemamwe mabhuku akanaka ayo vadzidzi vanogona kuverenga kuti vawane ITIL certification:
IT Service Management: Mutungamiri we ITIL Foundation Exam Candidates
Yakabudiswa neBBC uye yakanyorwa naR. R. Griffiths, E. Brewster, A. Lawes naJ. J. Sansbury, bhuku iri ibhuku rakakura rekudzidza kune avo vari kuronga kuchenesa kuedza mukuedza kwavo kwekutanga.
Onawo:ITIL Certification Career Opportunities
Zvinenge zviri nani kuitumidza kuti bhuku rekuongorora sezvo rinobatsira vadzidzi pakuongorora zveruzivo rwavo uye nekugadzirira kwavo kuonekwa nekuda kwekuongorora. Ichi ndicho chigadzirwa chechibvumirano chepamutemo chinosarudzwa muzvikamu zvina-chikamu chokutanga chinopa muongorori wehutungamiri hwebasa; chikamu chechipiri chinotakura maitiro ezvinyorwa zveupenyu hweTIL, chikamu chechitatu chinopa ruzivo rweIII maitiro nemabasa; chikamu chechina chinenge chiri pamusoro pezviyero & metrics.
Inopiwa neOGC, bhuku rino rinotaura zvikamu zvishanu zveI ITIL zvikamu zvishanu. Inotanga nehutano hwebasa, inoenderera mberi kunhanho yekuvandudza kushandiswa kwebasa uye inosanganisira mamwe mamwe ma modules pakati.
Iko mabhuku mashanu ari mu suite akabatana uye shanho rimwe nerimwe rinobatana nezera rekare. Zvose zvinokurukura nezvehutungamiri hwebasa semuitiro. Iyo ITIL Lifestyle Publication Suite inowanikwawo se PDF.
Iri bhuku rinotsanangurwa rinonyorwa nevadzidzi vaviri vanoremekedzwa zvikuru veItil - Helen Morris, uye Liz Gallacher. Inonyatsoongorora miviri yeIstecycle modules nenzira dzakajeka dzinoita kuti zvive nyore kunzwisisa. Kune rupo rwekushandisa ruzivo rwemavara, marati nemifananidzo zvinobvumira vadzidzi kuti vadzidze voga. Zvinyorwa zviri mune zvinongorongedza zvinonzwisisika uye zvinotsanangurwa nemimienzaniso chaiyo-miviri uye mibvunzo pamagumo echitsauko chimwe nechimwe kuti zvive nyore kunzwisisa.
ITIL Foundation Inokosha: The Exam Facts Unoda
Vachiremekedzwa nemudzidzisi mukuru we ITIL mukuru, Claire Agutter, bhuku iri rakanakisisa rekuti vadzidzi vadzidze. ITIL Foundation Inokosha inokurukura zvakakosha zveIITIL nenzira yakarongeka iyo yakarurama kune-in-point, iri nyore uye iri nyore kunzwisisa.
Onawo:Mhinduro Mubvunzo uye Mhinduro dzeIIT Exam 2017
Kunyange zvazvo mifananidzo miduku isingatarisi yakanaka asi iyo inotungamirira mazano kune vanotangisa avo vanongoda kuwana mhedziso yehurukuro yacho.
ITIL V3 Foundation Guide iBook yakasunungurwa inopiwa neTaruu, iyo inoshandiswa kweTI yekuchengetedzwa kwekambani kubva kuIndia. Icho chinyorwa che 45-peji chinyorwa chinogadzirisa zvose pfungwa dzeIITL hwedzidzo yekutanga. Kushandiswa kwaro kwakakodzera kwe infographics kunoita kuti iverengwe zvikuru. Icho chinonzwisisika uye chinotsanangura dzidzo dzinokosha nenzira inonzwisisika. Inoshandawo senzira yekutangira yevatangi vekutanga uye kune avo vanoda kuda kusimbisa ruzivo rwavo nemamwe mapiro.
Kupfuura Ita yako ITIL Foundation Exam - 2011 Edition
Iri bhuku nderimwe shamwari yakanakisisa yevadzidzi vari kutevera chivako che ITIL chechikoro. Kupfuura Ita yako ITIL Foundation Exam ibhuku rinozivikanwa re ITIL (kureva neTSO) uye rinogamuchirwa neIticial Official Accreditor. Iri gwaro rekudzidzisa rinopa mahedheni akazara zvakakwana zveSylla syllabus. Inobatanidza zvitsauko kwete kungoita zvekutarisira mabasa uye imwe neimwe yezvikamu zvishanu zvehupenyu asi inopa ruzivo pamusoro pekuongorora pachako.
Onawo:ITIL Certification - A Complete Guide
Tsanangudzo yepamusoro yemabhuku haisi kunetsa. Pane zvimwe zvakawanda zvingashandiswa kuvadzidzi kuti vavandudze ruzivo rwavo uye kuti vabatsire neIIT training nekudzidziswa.
# itil foundation certification
# itil training in Gurgaon
# itil certification in Gurgaon
Ndeipi iri nani Six Sigma kana Itil? Chii chakasiyana?
Chii icho ITIL? Ndezvipi Zvakanakira ITIL Certification?